Xog-warran: Maxay salka ku haysaa colaadda Soomaalida iyo Oromada? - Caasimada Online
Home Warar Xog-warran: Maxay salka ku haysaa colaadda Soomaalida iyo Oromada?
Xog-warran: Maxay salka ku haysaa colaadda Soomaalida iyo Oromada?
Kumannaan qof ayaa ku barakacay colaadda u dhexeysa Soomaalida iyo Oromada Itoobiya. Weriyaha BBC Kalkidan Yibeltal ayaa maqaalkan ku eegaya waxa ay colaadda salka ku hayso iyo in la joojin karo.
Adisu Arega oo u hadlay dowlad deegaanka Oromiya ayaa sheegay in 18 qof oo 12 ka mid ah ay Soomaali yihiin ay ku dhinteen colaadda hadda taagan.
Haseyeeshee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ku doodaysa in 30 Soomaali ah lagu dilay magalada Awaday ee gobolka Oromiya.
Dadka colaadda ka barakacay oo lagu qiyaasay 30 kun ayaa xeryo kumeelgaar ah looga sameeyay garoon ku yaal magaalada Harar iyo saldhigyo ay boolisku leeyahay.
Colaadda hadda taagan ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay ka billaabatay laba qof oo Oromo ah oo lagu dilay magaalada Hargeysa ee Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbannaanida ee Somaliland.
Dhanka kale, dad ka barakacy colaaddan ayaa lagu soo warramayaa inay gaareen magaalada Moyale ee dhanka Kenya, halkaasoo ay marar badan ku dagaallameen Soomaali iyo Oromo.
Wasiirka warfaafinta Itoobiya, Negeri Lencho, ayaa sheegay in milateriga iyo booliska federaalka la geeyay goobaha ay colaaddu ka taagan tahay, si ay uga hortagaan iska horimaadyo dheeraad ah.